XZ320D HDD nwere kọmpat Ọdịdị, magburu onwe arụmọrụ, zuru ezu ọrụ, haịdrọlik pilot akara, eji ogbe na pinion, na isi arụmọrụ kwa na akara technology ruru mba elu larịị. A na-eji sistemụ hydraulic, sistemụ ike, sistemụ arụmọrụ na isi ihe mejupụtara ngwaahịa ụlọ nke klas mbụ nwere ezigbo arụmọrụ na ntụkwasị obi.
Atụmatụ Okwu Mmalite nke XZ320D HDD
1. A na-emezi usoro ahụ n'ụzọ zuru ezu, ihe owuwu ahụ dị mma ma na-echekwa ike, ọsọ ọsọ na-abawanye, ntụgharị ọkụ eletrik na nke dị ala na-agba ọsọ, ọsọ ọsọ na-arịwanye elu, na arụmọrụ na ịrụ ọrụ nke ọma. mma.
2.Rack na pinion eji, iji hụ na nkwụsi ike nke e ji ebu ihe na ntụkwasị obi nke mbanye ọrụ.
3.The abụọ sere n'elu patented technology nke ike isi na abụọ sere n'elu patented technology nke vise nwere ike nke ukwuu ichebe eri nke malite ịgba ọkpọkọ na-amụba ọrụ ndụ nke malite ịgba ọkpọkọ.
4.High-speed sliding and rotation systems, engine na-agbanwe agbanwe iji nweta mgbanwe dị elu na nke dị ala, na-amụba ikike iji dozie ọnọdụ mkpọpu ala na-arụ ọrụ, na-eme ka arụmọrụ nke mkpọpu ala.
5.Support iche iche mkpa nke ndị ahịa, na igwe nwere ike dịkwuo na akpaka malite ịgba anwụrụ njikwa ngwaọrụ, akpaka anchoring usoro, oyi mmalite, kefriza apịtị, apịtị saa, apịtị throttling na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Main oru parameters
China nke Atọ
Pinion na ogbe mbanye
Max inye-esiri ike （kN）
Max inupụ-sere ọsọ （m / min）
Max spindle ọsọ （r / min）
Dayameta eng Ogologo （mm × mm）
Max Flow ọnụego （L / min）
Max mgbali （MPa）
Max uche n'akuku
Max backreamer dayameta
Ihe Nhọrọ Hazie
Injin QSB5.9-C210 Injin ChinaⅢ ☑
Mbido oyi Mbido oyi ☑
Anchor Mfe arịlịka ☑
Single akpaka arịlịka □
Arịlịka akpaka □
Usoro apịtị Apịtị mgbochi mmiri □
Mbat ihicha □
Pipeloader Ọkara akpaka pipeloader □
Full-akpaka pipeloader □
Isi nhazi nhazi
Aha Rụpụta factory
Injin Dongfeng Cummins
Isi mgbapụta Permco
Mgbapụta inyeaka Permco
Push Motor / belata XCMG
Esonye Akwụkwọ Akwụkwọ
XZ320D HDD igwe na-amalite mgbe esonyere mbukota ndepụta, gụnyere ndị na-esonụ oru akwụkwọ ：
Akwụkwọ ngwaahịa / Ntuziaka Ngwaahịa / akụkụ ngwaahịa Atlas / Ntọala mmezi akwụkwọ / Ntuziaka ntuziaka
Mbat mgbapụta ojiji na mmezi ntuziaka
Mbukota List (gụnyere yi akụkụ na akụkụ ahụ mapụtara, Ndepụta ngwá ọrụ ụgbọala, ndepụta mbufe na ihe)
Na na-aga n'ihu ọganihu nke technology, anyị enweghị ike n'ụzọ dị irè gwa gị nke ngwaahịa mgbanwe. Ntọala na njirimara ụdị aha edepụtara n'elu dị n'okpuru ngwaahịa ahụ, biko ghọta!
Nke gara aga: XRS8 / 45 rotary mkpọpu ala rig
Osote: XZ400 kwụ Directional Drilling rig
borehole mkpọpu ala igwe
directional mkpọpu ala rig
Hdd Drilling Akụrụngwa
HDd mkpọpu ala igwe
Kwụ Directional Drilling Equipment
Kwụ Drilling rig
Ọfụma Na-agwụ Ike
XZ2200 kwụ directional mkpọpu ala rig
Kwụ Directional Drilling rig, HDd rig, borehole mkpọpu ala igwe, HDd mkpọpu ala igwe,